ESI GỤỌ ỌNỤ ỌGỤGỤ NKE ỤKPỤRỤ DỊ NA KỌLỤM EXCEL - EXCEL - 2019
Na-agụ ọnụ ọgụgụ nke ụkpụrụ na kọlụm na Microsoft Excel
Igha ụgha na-enye ọrụ gị na Photoshop ụfọdụ omimi na izu okè. Enweghi mmetụta pụrụ iche dị otú ahụ ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ dị elu.
Na nkuzi a, m ga-akọwa otú ị ga - esi mepụta igwe ojii n'ime Photoshop.
A na-etinye ihe omumu a abụghị ihe dị ukwuu iji mee ka ọ pụta ìhè, dị ka okike nke brushes na mmiri. Nke a ga - eme ka o kwe omume ghara ime ihe ndị a kọwara na nkuzi oge ọ bụla, kama buru obere ahịhịa ahụ chọrọ ma tinye ụgbụ ọkụ ahụ na mbido ahụ.
Ya mere, ka anyị malite ịmepụta ikuku.
Ọ dị mkpa ịmara na ibu ibu nke oghere ahụ maka brush, ka mma ọ ga-apụ.
Mepụta akwukwo ọhụrụ n'usoro ihe nkesa CTRL + N ya na ederede ihuenyo.
Enwere ike idozi ma ọ bụ karịa, ruo 5000 pixels
Dejupụta obere oyi akwa na nwa. Iji mee nke a, họrọ isi ojii agba, were ngwá ọrụ ahụ "Mejupụta" ma pịa kwaaji.
Ọzọ, mepụta ohuru ọhụrụ site na ịpị bọtịnụ ahụ egosiri na nseta ihuenyo, ma ọ bụ jiri nchikọta igodo CTRL + SHIFT + N.
Mgbe ahụ họrọ ngwá ọrụ ahụ "Oval ebe" ma mepụta nhọrọ na ọkwa ọhụrụ.
A pụrụ imegharị nhọrọ ndị a na-eme na kọmpụ ma ọ bụ onye ọkpụkpọ ma ọ bụ akụ na keyboard.
Nzọụkwụ ọzọ ga-atụgharị n'akụkụ ọnụ nhọrọ ahụ, iji mee ka ókèala dị n'agbata ikuku anyị na onyinyo gbara ya gburugburu.
Gaa na menu "Mee ka", gaa ngalaba "Mgbanwe" ma chọọ ihe n'ebe ahụ "Ube".
Enwere ike iji radius a na-ahọrọ ihe dị ka akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị mepụtara akwụkwọ nke 5000x5000 pikselụ, mgbe ahụ redio kwesịrị ịdị 500 pixels. N'ọnọdụ m, uru a ga-adị 200.
Ọzọ, ịkwesịrị ịtọ agba: isi - nwa, ndabere - ọcha.
Mgbe ahụ mepee onwe ya. Iji mee nke a, gaa na menu "Filter - Rendering - Clouds".
Ọ dịghị mkpa ka ị gbanwee, ọ bụ naanị ya ka ọ ga-eme.
Wepu nhọrọ na igodo ụzọ mkpirisi. CTRL + D ma nwee mmasị ...
N'eziokwu, ọ bụ n'oge na-adịghị anya iji nwee mmasị - ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị ga-eme ka ihe odide na-esi na ya pụta ga-eme ka ọ dịkwuo egwu.
Gaa na menu "Filter - Blur - Gaussian Blur" ma hazie nza, dịka na nseta ihuenyo. Buru n'uche na ụkpụrụ dị n'okwu gị nwere ike ịdị iche. Lekwasị anya na mmetụta dị na ya.
Ebe ọ bụ na nnụnụ anwụrụ adịghị edo edo ma ọ dịghị otu ebe a, anyị ga-emepụta brushes dị iche iche dị iche iche dị iche iche.
Mepụta otu nkwekọrịta keystroke nke fog. CTRL + J, na site na nkuku mbụ ahụ wepụ visibiliti.
Lower opacity na-erughị ala na pasent 40.
Ugbu a, anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ mụbaa njiri mmiri ahụ "Na-agbanwe agbanwe agbanwe". Pịa igodo Nchikota CTRL + T, a etiti kwesịrị ịpụta na oyiyi ahụ na akara.
Ugbu a anyị na-eji bọtịnụ òké aka anyị na-pịa n'ime etiti ahụ, ma na menu ihe nchịkọta nhọrọ wepụtara ihe ahụ "Echiche".
Mgbe ahụ, anyị na-abanye akara aka nri n'elu (ma ọ bụ aka ekpe aka ekpe) na gbanwee onyinyo ahụ, dịka e gosiri na nseta ihuenyo. Na njedebe nke usoro ahụ, pịa Tinye.
Mepụta billet ọzọ maka ahịhịa na igweguru.
Mee otu okwute ahụ site na nsonaazụ mbụ (CTRL + J) ma dọrọ ya na elu nke palette. Anyị na-agbanye visibiliti maka oyi akwa a, na maka otu anyị na-arụ ọrụ, anyị na-ewepu ya.
Kpoo oyi akwa dị ka Gauss, oge a dị ike karị.
Kpọọ "Na-agbanwe agbanwe agbanwe" (CTRL + T) na mpikota onu ihe oyiyi ahụ, si otú a nweta "ikuku" na-akpụ akpụ.
Belata opacity nke oyi akwa na 60%.
Ọ bụrụ na ebe ọcha na-acha ọcha na onyinyo ahụ, ha nwere ike na-ese ya na-acha odo odo brush na opacity nke 25-30%.
E gosipụtara ntọala Brush na screenshots.
Ya mere, a na-emepụta ihe maka brushes, ugbu a, ọ dị ha nile mkpa ka a gbanwee ha, ebe ọ bụ na a pụrụ iji ahịhịa na-acha na-acha ọcha.
Anyị na-eji uru nchekwa ahụ eme ihe "Nabata".
Ka anyị leruo anya na billet ahụ. Kedu ihe anyị na-ahụ? Anyị na-ahụ oke ókè site na n'elu na n'okpuru, nakwa eziokwu ahụ bụ na ọhụụ gafere kaaji ahụ. A ghaghị ilebara nsogbu ndị a anya.
Mee ka nchekwa ahụ dị anya ma gbakwunye ya mkpuchi ọcha.
Mgbe ahụ, anyị na-ejikwa otu ntọala ndị dị otú ahụ dị na mbụ, ma nwee opacity nke 20% ma jiri nlezianya kpoo n'elu ala nke nkpuchi ahụ.
Ogo nke ahịhịa ka mma imekwu.
Mgbe ịmechara, pịa bọtịnụ aka nri dị na nkpuchi ma họrọ ihe ahụ "Tinye Nkpu Layer".
A ghaghị ime otu usoro ahụ niile. Algorithm dị ka ndị a: wepụ visibilia site na ala niile ma e wezụga nhazi ederede na Negative (topmost), gbakwunye ihe nkpuchi, kpochapụ ala ya na ahịhịa ojii na mkpuchi ahụ. Tinye ihe nkpuchi na na na ...
Mgbe edezi edere agwụ, ị nwere ike ịmalite ịmepụta brushes.
Tụgharịa ihe ngosi nke oyi akwa ahụ na oghere (hụ nseta ihuenyo) ma mee ya.
Gaa na menu Edezi - Kọwaa ahihia.
Nye aha ohuru ohuru wee pịa Ok.
Mgbe ahụ, anyị na-ewepụ visibiliti site na oyi akwa na oghere a ma gbanwee visibilia maka ebe ọzọ.
Tinyegharịa ihe ahụ.
Ihe niile e kere brushes ga-apụta na setịpụrụ ọkọlọtọ nke brushes.
Iji gbochie brushes site na furu efu, mepụta omenala ha.
Pịa na gia ma họrọ ihe "Nịm Management".
Anyị na-mwepu Ctrl ma n'aka nke ya, anyị na-pịa na ahịhịa ọhụrụ ọ bụla.
Wee pịa "Chekwa"na-enye aha nke set na ugboro ugboro "Chekwa".
Mgbe ihe niile kpesịrị "Emere".
A ga-echekwa ntọala ahụ na folda ya na usoro mmemme ahụ, na folda nchekwa "Presets - Nchacha".
Ị nwere ike ịkpọ ntọala a dịka ndị a: pịa na gia, họta "Ejiri ihe nkedo" na window nke meghere, chọọ maka setịpụrụ anyị.
Gụkwuo na isiokwu "Na-arụ ọrụ na brushes na Photoshop"
Ya mere, a na-eji brushes na-emepụta ihe, ka anyị lee ihe atụ nke iji ha eme ihe.
N'inwe echiche zuru oke, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ ntinye nke anyị ji mee ihe na nkuzi a na -echa na mmiri.
Bụrụ ihe okike!